Ilay New Djibouti Sheraton mifaninana amin'i Kempinski sy Atlantika ho Hotely ambony
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Djibouti Breaking News » Ilay New Djibouti Sheraton mifaninana amin'i Kempinski sy Atlantika ho Hotely ambony
Birao fizahantany afrikanina • Vaovao Mafana • Djibouti Breaking News • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • fampiasam-bola • fanorenana • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News
Ireo mpitsidika an'i Djibouti dia afaka miaina indray ny traikefa nahafantarana ny làlana tranainy indrindra amin'ny varotra sira rehefa mandeha miaraka amin'ireo rameva feno "volamena fotsy", ary milentika miaraka amin'ny Whale Sharks, iray amin'ireo toerana tokana eto an-tany afaka manatona akaiky sy manokana an'ireo zavaboary ireo . Afaka mitsidika ny Lac Assal maitso mamiratra ny vahiny, 30 minitra monja miala an'i Sheraton Djibouti, ilay farihy rano maitso dia manintona ireo mpahay jeolojika sy volkanolozista manerana an'izao tontolo izao.
Ny Kempinski, ny Atlantika ary izao ny Sheraton Djibouti dia mifaninana amin'ny vahiny mahatalanjona Morontsiraka Djibouti.
Androany dia nanambara i Sheraton- fanokafana taorian'ny fampiasam-bola Dolara an-tapitrisany tao amin'ny trano fandraisam-bahininy misy efitra 185 ho Hotely voalohany atsy Afrika amin'ity marika Marriott ity
Ny habaka reimagined dia mikendry ny hamorona tontolo iainana ahafahan'ny vahiny mahazo aina sy milamina, na miasa, mivory, na miala sasatra.
Miorina amin'ny fakany ho foibem-pokonolona ho an'ny mponina sy ny vahiny eo amin'ny toerana misy azy manerantany, ny fomba vaovao Sheraton dia mamorona traikefa mivaingana sy feno amin'ny toerana hifandraisana, hamokatra ary hahatsapa ho anisan'ny zavatra iray.
Any amin'ny Plateau du Serpent ao amin'ny Quart diplomatika taloha no misy ny hotely, eo akaikin'ny tanàna afovoan'i Djibouti ary 10 minitra avy amin'ny seranam-piaramanidina Iraisam-pirenena Djibouti Ambouli. Ilay Sheraton Djibouti malaza dia hotely iraisam-pirenena voalohany nisokatra teto an-drenivohitra, natambatra ny kolontsaina Djiboutiana manankarena sy ny fenitra fandraisam-bahiny manerantany. Ny trano fandraisam-bahiny dia neken'ny Repoblikan'i Djibouti tamin'ny taona voalohany nanokafana azy ary naseho tamin'ny hajia postal isan-taona. Marika iray ao amin'ny fiarahamonina eo an-toerana, Sheraton Djibouti dia mitazona fahatsiarovana manokana ho an'ireo Djiboutiana maro izay nankafy fitsidihana mahafinaritra, fivorian'ny fianakaviana ary fankalazana ara-kolontsaina tao amin'ny hotely.
“SQUARE PUBLICA” ANDRO moderina
Eo afovoan'i Sheraton Djibouti no misy ny loby mirehareha manasongadina tarehin-jiro kristaly mahatalanjona mampiseho ny sarin'i Djibouti. Ny efitrano fidiovana dia naverina natao sary an-tsaina hoe "Kianja ho an'ny daholobe" ao amin'ny hotely; toerana malalaka, malalaka izay manasa ny olona hiaraka na haka fotoana hitokana irery eo amin'ny hafa, ka hiteraka hery sy fananana. Miaraka amin'ny fikorianan-javatra voajanahary, mora vidy ary tsy sarotra, ny vahiny dia manana izay ilain'izy ireo eo an-tanan'ny sandry, napetraka manohitra backdrop manasa izay mahatsiaro ho mafana sy mahazo aina nefa voadio.
Sheraton Djibouti dia manasongadina ny singa sonia amin'ny fahitana vaovaon'i Sheraton. Anisan'izany ny Latabatra fiarahamonina, sehatry ny asa manasa sy namboarina izay miantsona amin'ny lavarangana fandraisam-bahiny ary mamela ny vahiny hiasa, hisakafo ary hisotro eo am-panafosafoana ny herin'ny habakabaka. Taorian'ny filozofian'i Sheraton mba hanaiky ny endrika sy ny asany, ireo latabatra ireo dia namboarina manokana miaraka amin'ny fampitaovana hitazomana ny vokatra ho an'ny vahiny, anisan'izany ny jiro anatiny sy ny jiro mandeha.
Ny Studios dia toerana malalaka fivoriambe azo atao ny mamandrika isaky ny mila izany ny vahiny, manamora ny fiaraha-miasa, mampifandray ary mifanerasera amin'ny toerana tsy dia misy fombafomba. Niorina tamin'ny lampihazo avo sy voahidy vera, ny Studios ampiasain'ny haitao dia mamela ny vahiny handray anjara amin'ny herin'ny habaka ampahibemaso sady manome fiainana manokana sy mifantoka amin'ny fivorian'ny vondrona kely na fanandramana fisakafoanana manokana.
Ny fanolorana sakafo sy zava-pisotro vaovao avo lenta Sheraton Djibouti dia miteraka teboka ifantohana amin'ny traikefa ao amin'ny lobby. Bara fizarana, trano fisotroana kafe ary tsena ampahany, ny Bara fisotroana andry afovoan'ny fahitana Sheraton vaovao, ny famindrana vahiny tsy miovaova isan'andro na amin'ny alina miaraka amin'ny safidy fisakafoanana izay voafidy eo an-toerana, mora lanina rehefa miasa ary azo ovaina handraisana ny tsiro sy ny fandaharam-potoana rehetra.
FIVORIAMBEN'NY TRANOM-PANAHY & CLUB IZAY famokarana CHAMPION
Ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny, izay misy fanavaozana miandalana, ny mpitsidika dia raisina an-tsokosoko amin'ny toerana mamirapiratra sy mazava miaraka amin'ny antso an-trano sy mafana. Ny famaranana malefaka sy ny feon-kazo maivana dia miaraka amina lantom-peo manga sy turquoise izay entanin'ny ranomasin'i Djibouti, raha ny rindrina kosa voaravaka kanto misy aingam-panahy ao an-toerana. Ny efitrano fandraisam-bahiny malalaka sy maoderina dia namboarina indray miaraka amin'ny fitaovana vaovao hamokarana, toy ny charger USB sy ny tontonana media. Ny vahiny dia afaka mankafy ny fampiononana rehetra antenaina amin'ny fijanonana Sheraton ao anatin'izany ny farafara sehatra Sheraton Sleep Experience sy ny fandroana mandeha an-tongotra ankehitriny.
Ny Sheraton Club Lounge novaina dia toerana manokana iray Marriott Bonvoy Mpikambana elite sy vahinin'ny Sheraton Club, ary manome tontolo iainana mandray sy avo lenta izay miova tsy mihetsika miaraka amin'ireo hetsika manomboka maraina ka hatramin'ny hariva. Ho hitan'ireo vahiny ny fanomezana sakafo sy zava-pisotro nohavaozina, kojakoja fampiasa premium, fampifandraisan-tanana mihamitombo ary fidirana 24/7 amin'ny tontolo manokana.
Ny mpitsidika dia mahazo fidirana amin'ny fialam-boly isan-karazany ao amin'ny hotely, ao anatin'izany ny pisinina any ivelany mitazana ny Ranomasina Mena izay ahafahan'ny vahiny miala sasatra sy misakafo ao amin'ny trano fisakafoanana amoron-dranomasina, Khamsin Pool Bar. Ny morontsiraka manokana an'ny hotely dia toerana mety tsara hampiantranoana fivoriana tsy miankina, barbeque rehefa milentika ny masoandro ary mankafy hetsika rano toy ny kayak sy ny paddleboard. Ny Crystal Lounge dia toerana tianao indrindra miaraka amin'ny vondrom-piarahamonina eo an-toerana ary manolotra safidy zava-pisotro, sakafo maivana ary fialamboly amin'ny hariva.
Sheraton Djibouti dia manana seho mirefy 327 metatra toradroa, ahitana efitrano fivoriana 3 sy efitrano filalaovana vao nohavaozina izay mahazaka vahiny 180. Ny fivoriana matihanina ao amin'ny trano fandraisam-bahiny sy ny matihanina amin'ny hetsika dia manome ny fahaizana ilaina sy ny fanampiana ilaina amin'ny fivoriana mahomby manomboka amin'ny fivorian'ny vondrona akaiky ka hatramin'ny fankalazana mariazy lehibe.
"Faly izahay mandray ireo mpandeha eran-tany sy ireo mponina eo an-toerana mba hiaina ny toerana vaovao sy manome aingam-panahy ao amin'ny Sheraton Djibouti," hoy i Boumediene Ouadjed, Tale Jeneraly ao amin'ny Sheraton Djibouti, . Ireo zaridaina midadasika misy ny farihy masinina, ny lemaka karakaina ary ny lohasaha feno harambato, dia mahatonga azy io ho toerana itiavan'ny olona tia natiora. ”
Ho fampahalalana bebe kokoa, tsidiho azafady www.herisnabesli.com